အမှန်တရားအတွက်ဆို မည်သူ့ကိုမှ ချန်လှပ်ထားလို့မရဘူး..အမြင်မတော်တာမှန်သမျှ အကုန်ရေးချသွားမည်..
မဖြစ်မနေ ရှင်းလင်း သုတ်သင်ရမည့် ချက်ကြီး အရှုပ်တော်ပုံ(အပိုင်း-၁-)
ဦးဥာဏသာရ(ခ)ဒေါက်တာချက်ကြီးသည် အသက်ကြီးမှ ရဟန်းဝတ်လာသူပီပီ
ဘုရားစာပေပိဋကတ် အခံမရှိသဖြင့် ရဟန်းတော်တို့နှင့် မလျော်သော အပြာဆိုဒ်
ဖွင့်ခြင်းအား အသက်ထက်ဆုံး ဆောင်ရွက်နေပုံကို ထောက်ဆသောအားဖြင့်
သူဘယ်လောက် တဏာရာဂ ပြင်းထန်သလဲဆိုတာ သူ့လုပ်ရပ်များက သက်သေ
ပြနေပါတယ်..မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းက သူ့ဘလော့မှာ ဒကာတော်ကို ချေပလိုသော
စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဒကာတေ်ာဘလော့ကို ဘလော့ကြေငြာလိုသဖြင့် သူ့ကိုတိုက်ခိုက်
အသုံးချသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်မှာ အင်မတန်မှ ရှက်ဖွယ်ဖြစ်ပေသည်။
အခုခေတ် ဘလော့ဖွင့်ခြင်း ၀က်ဆိုဒ်ဖွင့်ခြင်းစသော နည်းပညာရပ်များသည် လူငယ်
တွေမဆိုထားဘိ အမေ့ဝမ်းဗိုက်ထဲက ထွက်မလာသေးသော ကလေးသူငယ်လေးများ
ပင် လုပ်တတ်သော ကိစ္စရပ်ဖြစ်နေသဖြင့် အခုခေတ် ဘလော့ဖွင့်ခြင်း ကြေငြာခြင်းသည်
ဘာမှထူးဆန်းသော ကိစ္စမဟုတ်သဖြင့် ဒကာတေ်ာကို ဘလော့ကြေငြာသည်ဟု စွပ်စွဲချက်
သည် အလွန်ကလေးဆန်သော လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်မှာ သံသယဖြစ်စရာမရှိပေ။
ဒုတိယအချက်က သူသည် ဘွဲ့လွန်တက်နေသူဟု ပြောထားရာ ဒီလောက်အောက်တန်းကျလှ
သော သူက ဘွဲ့လွန်တက်ပြီး တစ်ချိန်မှာ နိုင်ငံတော်ကို ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ခဲ့သည်ရှိသော်
လက်အောက်ခံ့တပည့်များဟာ ဘယ်လိူလူတန်းစားတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတာ
အနာဂတ်အတွက် ကြိုတွေးပြီး ရင်လေးမိပြန်ပါသည်..
တတိယအချက်ကား သူဟာ လူပျိုကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သမက်တော်ချင်သူများ
ယောက်ဖတော်ချင်သူများ သူနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်သည်ဟု အရှက်မရှိ
ကြေငြာမောင်းခတ်ထားရာသူဘယ်လောက် တဏာအားကြီးသည် ပြင်းထန်သည်ကို မှန်းဆသိရှိနိုင်ပါသည်..နားနှင့်မနာဖ၀ါးနှင့်နာဆိုသလို ဤလို စိတ်ဓာတ်ရှိသူကို
ဘယ်မိန်းခလေးကမှ ကြိုက်ကြမည်မဟုတ်ပါ..အောက်ထစ်ဆုံး ပြည့်တန်ဆာမကပင်
စတုတ္တအချက်ကား သူသည် အာရှတိုက်တွင် နေထိုင်သူမဟုတ်ပါဟု သူ့ကို
သူတစ်ပါးကအထင်ကြီးလာအောင် ၀ါကြွားပြောဆိုထားသည်မှာ သေချာပါသည်..
သူမလေးရှား နေထိုင်သည်ကို သိသွားမှာ အရမ်းစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေပုံရပါသည်၊
အမှန်တကယ် သူသည် အာရှတိုက်တွင် နေထိုင်သူမဟုတ်ပါက ယခုလို
ဘလော့စပေါ့(blogspot)အဆင့်လောက်တော့ စဉ်းစားမည်မဟုတ်ဘဲ အဆင့်ရှိသော
၀က်ဆိုဒ်ကြီး အဆင့်ကို စဉ်းစားမည်ဖြစ်ပါသည်။အခုတော့ မဖြစ်စလောက်အဆင့် ဘလော့စပေါ့လေးဖွင့်ထားသည်မှာ ဥရောပတိုက်နေထိုင်သူတွေအတွက် အင်မတန်
သိက္ခာကျပါသည်။ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် ဒကာတော်အနေနဲ့ ဘလော့ကြေငြာလိုလျှင် ဦးဥာဏသာရ(ခ)ဒေါက်တာချက်ကြီးဘလော့လို ညစ်ငြမ်းသော အကျိုးမရှိသော
အောက်တန်းကျသော ဘလော့အမျိုးစားဖြင့် လုံဝ လုံးဝကြေငြာမည်မဟုတ်ကြောင်း
အားလုံးကို ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါသည်၊။
ပို့စ်တင်ချိန်- 11:06 PM2comments:
ဦးညာဏသာရ(ခ)ဒေါက်တာချက်ကြီး၏ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားခဲ့တဲ့ သာဓကပို့စ်တစ်ခု
ဦးဥာဏသာရ(ခ)ဒေါက်တာချက်ကြီးသည် ''ထိုင်းဘုန်းကြီးနဲ့ ဒကာမ''ဟူသော
ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြီးခဲ့တဲ့ (Wednesday, April 20, 2011)လောက်က မိုက်ရိုင်းစွာ
မူဗီပို့စ်တစ်ခုကို သူဘလော့မှာတင်ထားတာကို မိဘပြည်သူများ သိရှိကြတဲ့အတိုင်း
ဖြစ်ပါသည်။၄င်းမူဗီပို့စ်တင်မှုကို မည်သူမျှမကြိုက်ကြ မနှစ်သက်ကြတာကို အောက်မှာ
ဖော်ပြမဲ့ ကွန့်မန့်တွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်၊။။
အထက်ပါ ကိစ္စကို ထောက်ရှုသောအားဖြင့် ဦးဥာဏသာရဟာ
ဗုဒ္ဓဘာသာာဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆိုတာ တွေးတောစရာ ဖြစ်လာပါတယ်...အမှန်တကယ်တော့
သူဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆိုတာ အသေချာပါဘဲ။ သို့သော် သူသည် လုံးဝဦးနှောက်မရှိသော
အသက်ကြီးမှ ၀တ်လာသော ဘုန်းကြီး တစ်ပါးဖြစ်သည့်အလျောက်
""သားရေပေါ်အိပ်ပီး သာရေကို ပြန်ကိုက်ဝါးသော""ခွေးတစ်ကောင်
လက်ရှိသူ့ဘလော့မှာ ""ရှင်းလင်းစရာ မဟုတ်သော
ရှင်းလင်းချက်ဆို""သည့် ပို့စ်ကိုသေချာဖတ်ကြည့်ပါက သူ၏ အဆင့်တန်းကို
ကလေးကအစ ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပါသည်။ ဒကာတော်ပြောလို
သည်မှာ အကုသိုလ်ဟူသည် ဆိတ်ကွယ်ရာ မရှိဆိုတဲ့အတိုင်း
နေ့မှာ သူလုပ်ခဲ့သော သူဖန်တီးခဲ့သော အကြောင်းတရားများက သူနောက်သိူ့
အရိပ်ပမာ လိုက်ပါပြီးသူ့ဘ၀ကို ခြောက်လှန့်နေမည်မှာ သေချာပါသည်။
ဦးဥာဏသာရ(ဦးချက်ကြီး)မြန်မြန် နောင်တ ရနိုင်ပါစေလို့ အားလုံးကိုယ်စား
ဦးဥာဏသာရ(ခ)ဒေါက်တာချက်ကြီးအား မိဘပြည်သူတွေက ဘယ်လို
မေတ္တာရေတွေ လောင်းခဲ့ကြလဲ သိရအောင် ကွန့်မန့်တွေကို မူရင်အတိုင်း
ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်..ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့် စဉ်းစားတွေးတော့ ဖတ်ရှုကြ
ဟိတ်ကောင် ချက်ကြီး မင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င် စစ် စစ် ဆိုရင် အဲဒီ မူဗီကို အစကတည်း မတင်သင့်ဘူး.. ပြန်ဖျက်လိုက်ပါ..
Zay Yè Paing said...
သင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့ကွာ လုပ်ချင်ရင် ဘုန်းကြီးထွက်ပြီးလုပ်ပေါ့ အခုဟာက လွန်လွန်းတယ်. . ကိုချက်ကြီး ဒီ ဗီဒီယိုကိုတော့ ဖျက်လိုက်ပါဗျာ. . ။
April 20, 2011 11:01 AM
ချက်ကြီး ဒီမူဗီးကကြာပြီ။ ဘယ်သူမဆို သင်္ကန်းဝတ်ပြပြီး လို့းလို့ရတာဘဲ။ ကုလားဝတ် ၀တ်ပြီးလဲ လိုးလို့ရတာဘဲ။ ဒါတွေက ဟုတ်ခြင်လဲ ဟုတ်မယ် မဟုတ်ခြင်လဲ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ပို့မှာ တင်တာတော့ လုံးဝမသင့်တော်ပါဘူး။
April 20, 2011 11:19 AM
hot par tel byar...deleted lot light par...see ya tar lal feel ma shi par bu...
Should delete , ko chat gyi
April 20, 2011 1:22 PM
မင်းတို့ကောင်တွေ လီးဖြင့်ရင် မကြည့်ကြနဲ့ ကျေးဇူးပြုပြီး တင်ပေးတဲ့သူကို မစောကားကြပါနဲ့ စောင့်ကောင်းနဲ့လဲ တင်ပေးထားရသေးတယ် မင်းတို့ကောင်တွ လီး ဖြစ်နေရင် ညိမ်ညိမ်နပါလား ဘာလို့ ဖင်ယားပြီး လာကြည့်နရသးတာလဲ
ko chat g: yay....dmovie ka members tway followers tway nell ag lote ta lo pyit nay ohn mel
April 20, 2011 2:51 PM
တင်ပေးတဲ့သူကိုစော်ကားတာမဟုတ်ပါ စဉ်းစားစေချင်တာပါ ဆဲနေတဲ့ ခင်ဗျားလို လူတွေ နားလည်မှာမဟုတ်လို့ မပြောချင်ပေမဲ့ နုတ်ကြမ်းတဲ့ ခင်ဗျား ကြောင့် မိဘ တွေ ထိခိုက်နေပါဦးမယ်
April 20, 2011 3:03 PM
ကိုချက် ဖြုတ်လိုက်ပါဗျာ ဘာသာခြားတွေက အခွင့်ရေးယူပြီး ဗုဒ္ဒဘာသာကို စော်ကားတော့မယ် ခင်ဗျား ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင် မတင်သင့်ဘူး။ ကျွန်တော် အဲလောက်ပြောရင် ခင်ဗျားလဲ နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်
April 20, 2011 3:13 PM
"ခေတ်မကောင်းလို့ အစစ ပျက်ပြီးနောက်ကျ သာသနာလည်းညှိုးနွမ်းနေတဲ့ကြားက မြန်မာ့ ဘာသာရေးသာသနာရေးကိုအလင်းပြမည့် ကိုချက်ကြီးကို အခွင့်သင့်ရင် အပြင်မှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ ဆုံချင်သဗျ" ဗုဒ္ဓသာသနာသည် ဂျပန်နှင့်အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများတွင်ကျဆုံးမှုများရှိပီးတော့ မြန်မာနှင့်ထိုင်းလောက်သာကျန်တော့တာ ထိုင်းမှာလည်းအခုလိုပဲပျက်စပြုနေပြီထင်တယ် မောင်ချက်နည်းနည်းလောက်တော့ ဆင်ချင်သင့်ပါတယ် မွတ်ဆလင်ဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်တော့ မိုက်လွန်းရာကျပါတယ်သားကြီးရာ
သြဇီက စောက်ကောင်မတွေပုံတွေကျတော့ ဟိုက စောက်ဖုတ်လှန်ပြပေးလိုက်လို့ ချက်ချင်းပြန်ဖျက်ပေးလိုက်တာလား။ ကိုယ့်လူမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာတူဖြစ်တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဒဘာသာဆိုတဲ့ နာမည်တစ်ခုလုံးကို ခြုံပြီး ပြောကြမှာပဲ။ဒီတော့ ဒီဖိုင်ကြီးကို ဖျက်ပစ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။ မဖျက်လည်း ကိစ္စတော့မရှိပါဘူး။အကုသိုလ်အားပေးတစ်ယောက်အဖြစ် ကိုယ်ပဲခံရမှာပဲ။အပြစ်လုပ်သူက အပြစ်တိုင်းခံစားရမှာပဲ။ကိုယ်က အပြစ်လုပ်သူကို သွားပြီး အားပေးသလိုသွားမလုပ်ဖို့လိုတယ်။ ကွန်မန့် ၁၄ ၁၅ ခုလောက်ရေးတဲ့ပို့စ်ဆိုတာ ရှားပါတယ်။အခုလို ဖိုင်မျိုးမှာ လာရေးကြတယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်လို့ ထောက်ပြပေးနေတာပါ။အားအားယားယားပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဟာ လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။သာသနာညိုးနွမ်းစေမယ့် အရာတွေဖြစ်လို့ သတိပေးတားမြစ်နေတာပါ။ မောင်သတိ
ကင်မရာတွေပေါတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဆိတ်ကွယ်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လူမြင်ကွင်းမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မဟုတ်တာ မလုပ်ကြပါနဲ့ ..........။ ဒီဟာကြီးကတော့ ကြည့်တဲ့သူတိုင်း စိတ်မကောင်းနိုင်ကြပါဘူး.......။
April 20, 2011 7:41 PM
ဘုန်းကြီးတွေ လုပ်ချင်ရာလုပ်ပြီး သူများဘာသာကျတော့ကဲ့ရဲ့ကြတယ်.. ဗုဒ်ဓဘာသာဆိုတာ ဘယ်လိုလည်းသိသွားအောင်. ဒီ movie မဖြတ်သင့်ပါဘူး.. download လုပ်သွားပြီ.... ဘုန်းကြီးအစ ဂေါဓမ က..ဂေါဓမ ရဲ့ မူခွဲလေးတွေပေါ့ ဟီးး
အင်း ဒါတော့ မကောင်းဘူး ချက်ကြီးရ။ တခြားဘာသာဝင်တွေအတွက် အကွက် ဆိုက်သွားနိုင်တယ်။ လိမ်မာပါတယ် သားကြီးရာ။ ဘုန်းကြီးက အတု ဖြစ်နေရင် မင်းလည်းမကောင်းဘူး။
April 20, 2011 8:18 PM
April 20, 2011 9:54 PM
မအေလိုးမသားချက်ကြီးဘလော.ကိုတိုင်နည်း....................... အပေါ်မှ report abuse ကိုနှိပ်ပြီး၊hate သို.မဟုတ်တခုခုေ၇ွးပြီး၊ဆက်သွားပါ။ ချက်ကြီးဘလော.ပေါ်နေသော boxေ၇ာက်သောအခါ summit လုပ်လိုက်ပါ။ အကုန်သူညီညီညာညာလုပ်ပေးခြင်းဖြင်.ချက်ကြီးဘလော.ကြီးတာ.တာပြ သွားပါလိမ်.မည်။
April 20, 2011 10:10 PM
အဲ့တစ်ခုဖြတ်လိုက်ရင် တော်တော်လေးအစဉ်ပြေမှာပါ အဲ့ဗိဒိယိုလေးတော့ဖြတ်လိုက်ပါသူငယ်ချင်း ဒေါက်တာချက်ချက်ကြီးက အောင်မြင်နေတဲ့ sexy ဆိုက်တစ်ခုပါ အဲ့တစ်ခုကြောင်စိတ်အညစ်မခံပါနဲ့ ဖြတ်လိုက်ရင်အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ
April 20, 2011 10:50 PM
ငါလိုးမသား ချက်ကြီး ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်နဲ့ ပြောလို့မရတဲ့ နွားမသား။ လိုးသတ်လိုက်မယ်၊ နင့်မေယောင်္ကျားမိုလို့ ဒီမူဗီးကို တင်ထားရတာလဲ။ ငါလိုးမသား ချက်ကြီး သေချင်းဆိုး။ ကိုယ်မေကိုလိုး။ ဘယ်သူမဆို ကြိုက်တဲ့အ၀တ်ကို ၀တ်ပြီး လိုးတင်လို့ရတာဘဲ။ ငါလိုးမသား တင်စရာ ရှားလွန်းလို့။ မင်း အမေစောက်ပတ်ကို ငါလိုးနေတဲ့ မူဗီးကို တင်ပေးပါ့လား။
April 20, 2011 10:52 PM
ငါကမူဆလင်ကွ မင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဒီလိုလုပ်ချင်လို့နာမယ်ကြီးအောင် ရင်းထားရတာ ။လီးတောင်မဖျက်ဘူး။ တိုင်ချင်တဲ့ဆီတိုင်ကွာ
April 21, 2011 12:51 AM
အရှိကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံရဲကြမှပေါ့ကွယ်... အဲဒါကြီးကိုဖျက်ပလိုက်လဲ ဘုန်းကြီးက ဒကာမကိုကြုံးတာကာကြုံးပြီးသွားပြီး သူ့ဘာသာတွေ ကိုယ့်ဘာသာတွေလုပ်မနေနဲ့တော့။ ဘုန်းကြီးလဲလီးနဲ့ပဲ...။ တရားဒမစိတ်ရှိရင် သင်္ကန်းဝတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူး..။ ငါလိုးမချက်ကြီးကလဲ title မှာကျတော့ရင်ရင်ကျေးကျေးပြောတယ်။ ကော့မန့်မှာကြတော့ရိုင်းလိုက်တာ။ ငါ့လိုပဲ.. မြို့ကြီးသားမပီသလိုက်တာ မြင့်ဇုမပတိပတာ
ချက်ကြီး အဖေ said...
ဟိတ်ကောင် ချက်ကြီး လူဆို ကျေးဇူးတရားကို အောက်မေ့တတ်ရတယ်ကွ မင်း လူ့ ဘ၀ထဲ ထွက်လာအောင် မင်း အဖေက မင်း အမေကို လိုးပေးခဲ့ရမှာပဲ အဲဒီလို လိုးနိုင်အောင် အားအင်တွေက တိုင်းပြည်က ထွက်တဲ့ ဆန်ရေစပါး သားငါး သီးနှံတွေ အဲဒီလို အရှက် လုံလုံခြုံခြုံ လိုးနိုင်အောင် တိုင်းပြည်က ထွက်တဲ့ သက်ကယ် အမိုးအကာ ပျဉ် တွေ အဲဒီလို လိုးပြီးတဲ့ အခါ ချက်ကြီးဆိုတဲ့ သန္ဓေယုတ်ကို ကြီးထွားလာအောင် အနွေးဓါတ်တွေကို တိုင်းပြည်ကထွက်တဲ့ ချည်မျှင်ဝါဂွမ်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့ရတာပဲ။ မင်း အခုလို မိုက်ရိုင်းထွားကျိုင်းနေအောင် လည်း မြန်မာစာက ပဲ ထောက်ပံ့ရပဲ မဟုတ်လား။ မင်း ဘယ် ဘာသာပဲ ကိုးကွယ်ပါစေ ကျေးဇူးတရားကို သိတတ်တယ် ဆိုရင် အဲဒီလို ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ သူတွေ အမြတ်တနိုး ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို အသရေ ညှိုးနွမ်းအောင် အစကတည်းက မလုပ်သင့်ဘူး.. ဒီပိုစ်က ဒီဘလောဂ် အတွက် နောက်ဆုံးပိုစ်ပဲ..
April 21, 2011 7:44 AM
ချက်ကြီး ဒီပိုစ်ကို ဖျက်လိုက်ပါ၊၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘယ်အတွက်မှ အကျိုး မရှိပါဘူး၊ ရာဂ အလုပ်ကို ပျော်လို့ လုပ်နေကြတာ ကြည့်နေကြတာပဲ၊ အကျိုးမများဘူးဆိုရင် ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်၊၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
သြဇီက စောက်ကောင်မတွေက စောက်စိတစ်ချက်တောင်ပြပြီး စော်ဖုတ်တစ်ချက် ဖြဲပြလိုက်တာနဲ့ ချက်ကြီးက တစ်ခါတည်း လီးစုပ်ရတဲ့မျက်နှာနဲ့တန်းဖျက်ပေးလိုက်တယ်။ကိုယ့်သာသနာညှိုးနွမ်းစေမယ့် စောက်ဖုတ်မမြင်ရတဲ့ ဒီမူဗီဖိုင်ကြတော့ လီးစို့ထားတဲ့ပါးစပ်လို ခွေးအကြီး လှည်းနင်းထားသလို နားမကြားသလိုလို နဲ့ လာလုပ်နေတယ်။ ပါးပိတ်ရိုက်ပစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ စောက်ရေးမပါတဲ့ ဘလော့အောက်က ၀မ်နည်းခြင်းဆိုပြီး ရှူးတူးတူးပေါတောတောစာတွေရေးထားတာတွေကလည်း စောက်ရှက်ကိုမရှိဘူး။လိုးတဲ့ဆိုက်ကို ဘယ်company က လာကမ်းလှမ်းမှာလဲ။ကြောင်တောင်တောင်နဲ့။ အမြင်မတော်တာကို ၀င်ပြောတတ်တဲ့... မောင်သတိ
April 21, 2011 8:13 AM
ငါပြောပြီးဘီ ငါကမူဆလင်မို့ တင်ထားတာပါလို့ ။ လုံးဝ မဖျက်ဘူးကွာ။ ချက်ကြီးဘလော့ကို တိုင်ချင်တဲ့ဆီတိုင်ပေါ့။ ဟတ်ကာလုပ်လို့ ရရင်လုပ်ပေါ့။ ချက်ကြီး စိန်ခေါ်တယ်ဟေ့ ။ မင်းတို့ တွေက အရင်က ငါ့ကျေးဇူးကိုမှ မထောက်ကြဘူး။
ငါလိုးမသား ချက်ကြီးကတော့ ဖင်လိုးခံရတော့မှာ။ မဟုတ်မဟတ်လုပ်ဇာတ်တွေ ဆင်လာတယ်။ စောက်ဆင့်မရှိတဲ့ကောင်။ စောက်ဆင့်မရှိလို့လဲ ဒါမျိုးလုပ်စားနေတဲ့ကောင်။ ဖာသယ်မသား။ မင်းအမေ ငါလိုး။ မင်းနှမ ငါညှောင့်၊ မင်းအမေ ငါလိုးထားတဲ့ မူဗီလေးကိုလဲ တင်ပေးလိုက်အုံးမယ်။ စောင့်ကြည့်နေလိုက် သိလား။
ငါလိုးမသား ချက်ကြီး!လီးကျေးဇူးပါလား မင်းဘလော့ဂ်ကိုကြည့်ပြီး တဏှာပွားပြီး ရာဂတိုးတယ်။ ပြီး မနေနိုင်လို့ ဂွင်းထုအားကုန်။ တွေ့သမျှ မိန်းမတွေကို မနေနိုင်လို့ စိတ်ထဲက ကြိတ်မှန်းပြီးလိုး နှမချင်း မစာနာ၊ တပေါက်မကျန်။ ဒါတွေက မင်းဘလော့ ကြည့်ရချင်းရဲ့ ရလဒ်တွေဘဲ။ လောကလူသားတွေကို အမှောင်ချပြီး ပြစ်မှုတွေဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးနေတဲ့ ဘလော့ဂ်။ ဒါများ လီးကျေးဇူး တင်ခံချင်သေးတယ်။ ကိုယ်မေကိုယ်လိုး ခွေးမသား။ ရော့ ငါ့လဒစ်!!!!!
April 21, 2011 8:50 AM
နိုင်ငံတော် သမ္မတ သိန်းစိန် said...
မင်းတို့ကအစိုးရကိုတော့ သတင်းအမှောင်ချသလေးဘာလေးနဲ့ ခုတော့ဒီသတင်းကိုလဲအမှောင်ချစေချင်တယ်ပေါ့ အစိုးရကိုစာနာကွာ သူတို့မကောင်းတာလုပ်တာလူမသိစေချင်တာအပြစ်မပြောနဲ့တော့ အိုကေ ပုံ သိန်းစိန် အသစ်စက်စက်သမ္မတ
April 21, 2011 10:01 AM
ရန်ကုန်မှာပေါပ ဘုဉ်းကြီးတွေ အောကားလိုက်မေးနေတာ လမ်းဘေးဆိုင်တွေမေးကြည့် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးမရှိရင် ခိုးကြည့်ပီ
April 21, 2011 10:04 AM
ငါလိုးမသား ချက်ကြီး -- ကျက်သရေတော်တော်တုန်းတဲ့ကောင်။ ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် ဘာသာချင်း ပြဿနာဖြစ်အောင် လာဖန်တီးနေသေးတယ်။ မအေလိုး ချက်ကြီး လီးပဲ။ မင်းဖာသာ မွတ်ဆလင်ဖြစ်ဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ် ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ် ဟိန္ဒူဖြစ်ဖြစ် မင်းနှမ မင်းအမေနဲ့ မင်းကိုပါ လိုးသတ်ပစ်မယ်။ နားလည်လား မအေလိုးလေး
လီးဖြစ်လားကွာ မဖျက်ဘူးကွာ။ မင်းတို့ ဗမာစောက်ပတ်လေးတွေကို ကမ္ဘာသိအောင်လုပ်ပေးနေတာလေ ။ ငါက မူဆလင်ဆိုတော့ လီးဖြစ်လား။ မကြိုက်ရင်လာမကြည့်နဲ့ ... မင်းတို့ ကို လာပါလို့ မခေါ်ဘူး။ ချက်ကြီးဘလော့ကိုတော့ ဘယ်တော့မှမဖျက်ဘူး
ဟေ့ကောင် ငါလိုးမသား ချက်ကြီး မင်းထမင်းစားလို့ ကြီးလာတာ။ မြန်မာပြည်က ထမင်းကိုစားပြီး မြန်မာစကားနဲ့ မြန်မာတွေကို မစော်ကားနဲ့။ မင်းကိုပြောနေတာ ဘာသာရေးနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ မင်းဖာသာ မွတ်ဆလင်ဖြစ်ဖြစ် ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ် ဘာသာမဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ဘာသာကိုမှ စော်ကားတဲ့ ပိုစ့်မတင်သင့်ဘူး။ မင်း မွတ်ဆလင်ဖြစ်လို့ ဗလီဆရာ ခွေးလိုးနေတဲ့ပုံ တင်လည်း လာဆဲမှာပဲ။ ဖြုတ်ပစ်ပို့ ပြောမှာပဲ။ ငါလိုးမသား နားလည်လား။ ရုးသလိုလို မူးသလိုလို လာမလုပ်နဲ့ လီးပဲကွ။ မင်းအမေ မင်းနှမနဲ့ မင်းကိုပါ လိုးသတ်ပလိုက်မယ်။
&amp;amp;amp;lt;img src="http://1.bp.blogspot.com/_8H9MwIF8RV8/S0ATC3nXFqI/AAAAAAAAAAk/pDRm_llPKRQ/S45/qqqqq.jpg" width="35" height="35" class="photo" alt=""&amp;amp;amp;gt;
April 21, 2011 12:18 PM
ချက်ကြီးရေ ဒါကြီးတော့ မကောင်းဘူးဟ ပြန်ဖျက်လိုက်ပါကွာ....... မသင့်တော်လို့...ကွ...
April 21, 2011 12:21 PM
ငါချက်ကြီးအစစ်ကွ မင်းမေလိုးလား လာဖျက်မခိုင်းနဲ့ ... မကြည့်ချင်မလာနဲ့ ပေါ့... လီးဖြစ်နေတာလား။ ဆဲတဲ့ကောင်တွေကို အိုင်ပီပါဘမ်းပစ်လိုက်လို့... မင်းတို့ နှမလိုးထားတာတွေ မကြည့်ရဘဲနေမယ် ဘာမှတ်လဲ
April 21, 2011 12:50 PM
ချက်ကြီးေ၇..မင်းကဘယ်ဘာသာပဲဇြစ်ဇြစ်ကွာ ငါတို့တွေက မင်းတို့၇ဲ့ ဘာသာကိုမစော်ကားသလို တို့တွေ၇ဲ့ ဘာသာကိုလည်းမစော်ကားပါနဲ့ကွာ မင်းကတော့ အောကားဆို၇င်တင်ပေးတာ မှန်ပေမယ့် ဒီလိုမျိုးတွေတော့ ငါတို့တွေမကြည့်ချင်လို့ပါကွာ..မင်းလည်းလူသားတစ်ယောက်ပါပဲ မင်းဘာသာကို သူများစော်ကား၇င် မင်းလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်သလိုပါပဲ စာနာနားလည်ပေးပါကွာ..ဒီထဲမှာ ပြန်ေ၇းတာ ချက်ကြီးအစစ်မဟုတ်၇င်လည်း တကယ့်ချက်ကြီးကို ပြန်ဖျက်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်..တခြားဟာတွေပဲတင်ပါကွာ..အားလုံး၇ဲ့ ကိုယ်စားတောင်းပန်ပါတယ်.....
အပေါ်ကငါ့မယားပါသားချက်ကြီး မင်းပထွေးလာပြီ မင်းချောင်ကိုသွားခွေနေတော့ မင်းအမေမွတ်ဆလင်မကြီးလည်းအိပ်သွားပြီး ငါခဏမင်းကို ဘလော့ကိုအစောင့်ခိုင်းထားတာ မင်းကလာဆဲနေတယ် သေနာကောင်လေး
April 21, 2011 3:40 PM
April 21, 2011 4:22 PM
အားလုံးကို ထောက်ပံပါတယ်။ ပုံ သက်ကြားရွယ်အိုများစုဝေးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဒေါ်စုကြည်
မင်းလဲအိုရမှာပဲလုပ်မနေနဲ့ မင်းအိုမှဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှ လက်မခံပဲ တယောက်ထဲမသာပေါ်နေမယ် အပေါ်ကမသာ
မြန်မာ porn လောက အောင်မြင်ပါစေ ငါ့တုန်းကအဲတာတွေမရှိဘူးကွ ရှိရင်အရီးကြီးတွေပန်:ဦးပန်တာ တင်ချင်စမ်းပါဘိ
April 21, 2011 5:45 PM
ဦးချိန်တီ(အစာကြေ ဖင်နိုင်ဆေး) said...
မောင်သတိ ဝူးတူးဝါးတားနဲ့ စီးပွားရေးသမားကလူများတဲ့နေရာ ကြော်ငြာမှာပဲ အိမ်သာထဲထောင်ကြော်ငြာကပ်သေးတာပဲ မသိရင်ရမ်းမတုတ်နဲ့ ငါလဲ ငါ့ရှောက်သီးဆေးပြား ဒီမှာကြော်ငြာရင်ကောင်းမလားလို့ အဟေးဟေး
ငါလိုးမသား ချက်ကြီးကလည်း အစစ်ဖြစ်လိုက် အတုဖြစ်လိုက် မွတ်ဆလိမ်ဖြစ်လိုက်နဲ့ ဘာတွေမှန်းမသိဘူး။ ရှုပ်နေတာပဲ။ ချက်ကြီးမှန်သမျှ လီးပဲကွာ။ ငါလိုးမသားဒေ
April 21, 2011 7:26 PM
Anonymous တို့၏ ဖခင်ကြီး said...
အစစ်ဖြစ်ဖြစ်အတုဖြစ်ဖြစ် မူဗွီတင်ရင်ပြီးရော ကွာ လီးဖြစ်နေတာလား
ငါလိုးမသား ချက်ကြီး ဘောမတွေ လီးပဲကွာ
မြန်မာတွေတော်တော်များများ အွန်လိုင်းမှာတွေ့ဘူးတယ် . အမှန်တရားကို လက်မခံရဲကြဘူး . ဘုန်းကြီး ဆော်ချတယ် ဘာဖြစ်တယ် . မကောင်းတာက လုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးပဲ . ကိုယ်ကိုတိုင်ကလည်း ဗုဒ္ဓ ဘာသာတစ်ယောက်ပါပဲ. ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဘာထိခိုက်တာမှတ်လို့. ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ကောင်တွေက ရာခိုင်နူန်းဘယ်လောက်တောင် ကောင်းနေလို့လဲ။ ဆော်လိုးနေတဲ့ဘုန်းကြိးတွေ အများကြီးပဲ . အဲ့ဒါက ဘာလဲဆိုတော့ ဘုန်းကြိးမြင်တိုင်း လက်အုပ်ချီတဲ့လူတွေ နောက်တော့ ဘုန်းကြီးလိုတာ ခံလိုက်ရတာပဲ .. မစူးမစမ်း စောက်သုံးမကြတဲ့ လူတွေ အတွက် ဒီလိုမျိုးတွေ များများကြည့်သင့်တယ်.
ဘုန်းဋ္ဌကီးတွေကမှ အားကောင်း၂နဲ့ ညှောင့်ပေးနိူင်တာ မနာကျပါနဲ့ဆွမ်းခံပြီး အပျင်းထူနေတဲ့ လူသားတွေပါ ဘာမှပင်ပန်းတာမလုပ်ရတော့ဘုန်းဋ္ဌကီးတွေ အားသန်သဘိ အနဲ ဆုံး ၁နာရီလောက် ဆောင့် ပေးနိူင်မှာ ဒေါက်ချက်ကို စော်ကားသော သူများအားလုံး လီးမှာအနာပေါက်ကျပါစေ
ဘုန်းဋ္ဌကီးနဲ့ လိုးချင်တယ် တော်၂သန်မှာ ဘာအလုပ်မှ မလုပ် ဖင်ခံချင်သော ရန်ကုန်သား လေးပါဗျာ
April 21, 2011 9:42 PM
ငါလိုးမသားချက်ကြီး မင်းကိုဒီဗီဒီယိုကို ဖျက်လို့ငါပြောနေတယ်။ မင်းမဖျက်ရင် မင်းအမေ မင်းညီမ နဲ့လိုးထားတဲ့ ဗီဒီယို တွေကို အွန်လိုင်းမှာဖွလိုက်မှာနော်.. အဲ့ကျမှ ပုလဲလုံးတွေ မကျနဲ့.. . . ။ အပေါ်က ငါလိုးမသားမူစလင်တွေလဲ လီးဖြစ်နေတာလား ? ငါလိုးမသားတွေလို့ ပြောရတာတောင် ငါနာတယ်. . သူ့တို့ အမေမူစလင်မကြီးတွေကို လိုးရမှာစိုးလို့ . . မင်းတို့ မူစလင်တွေလဲ ပွဲလန့်တုန်း ဖျာဝင်မခင်းချင်ကျနဲ့ မအေလိုးမူစလင်တွေ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ပြဿာနာဖြစ်တဲ့ မအေလိုးတွေ။ မင်းတို့ကောင်တွေ ကျွန်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မင်းတို့မိဘတွေ လိုးပြီးမွေးလို့ မင်းတို့တွေ ဒီအရွယ်ရောက်ပြီး မြန်မာစာကိုရေးတတ်ကြတာ. . . မြန်မာတွေကိုမစော်ကားနဲ့ မြန်မာတွေကို စော်ကားရင် မင်းတို့ညီမတွေ အမတွေ မလိုးရေသေးပဲ အကုန် ဗိုက်ကြီးကုန်မယ်. . .။
April 21, 2011 10:42 PM
April 21, 2011 10:49 PM
ဆက်လုပ် ကိုချက်ကြီး။ ဒီဘုန်းကြီး သူ့ဟာသူ ကျူးလွန်တဲ့ အပြစ်ပဲ ခင်ဗျားနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ မဖျက်နဲ့။ အားပေးတယ်။ ဘာမှ ဖျက်ပစ်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ လက်မခံနိုင်တဲ့လူ ဝင်မကြည့်ချင်ဘူးဆို မကြည့်ပစေနဲ့။ ဒေါက်တာချက်ကြီး ဒီလိုဖြစ်လာအောင် တင်ခဲ့ရတာ ကာလဟာ နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ အမာခံ ပရိတ်သတ် ရှိပြီးသား။ ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်း ခပ်မာမာသာချ။
April 21, 2011 11:00 PM
ငါလိုးမသားတွေ ချက်ကြီးဖင်ချတာ သွားခံကြ။ ပီးရင်လာခဲ့။ လိုးသတ်ပစ်မယ်
April 21, 2011 11:07 PM
လီးရှိလို့ လိုးတယ်၊ စောက်ပတ်ရှိလို့ ကုန်းတယ် ခံတယ်။ ကြိုက်တဲ့အရေခြုံပြီး လိုးလဲရတယ်။ အားလုံးဟာ ပညတ်တွေပါ။ လူသားတွေဟာ သွေးသားနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မှားမယ် မိုက်မယ် မဟုတ်တာတွေ လုပ်မယ် ဒါမှလဲ သဘာဝကျမယ်၊ အမှားဖြစ်မှ အမှန်သိတယ်။ ဘုန်းကြီးလဲ လီးပါတယ် လိုးမှာဘဲ၊ ချက်ကြီးလဲ လီးပါတယ် လိုးမှာဘဲ။ ချွင်းချက်(ချက်ကြီးက gay ဖြစ်နေရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး)ဒါဆိုတော့ ...ဟဲဟဲ၊ လိုးတာဟာ အပြစ်လို့ ဖွဲ့ဆိုရင်တော့ မင်းတို့ ငါတို့ လူဖြစ်လာစရာ အကြောင်းကို မရှိဘူး။ သဘာဝတိုင်း တည်ရှိနေတဲ့ လိုးချင်းရိုးရာကို ငါတို့ဘော်ဒါတွေ အာလုံးလက်ခံတတ်ဖို့ပါဘဲ။ ပေါ်တင်လိုးတာနဲ့ တိတ်တ်ိတ်ပုန်းလိုးတာဘဲ ကွာပါတယ်။ အားလုံးဟာ အလိုးမျိုးတွေပါ။ ဒါကို သင် လက်မခံဘူးဆိုရင်တော့ တခုခုချို့ယွင်းနေလို့ပါ။
April 21, 2011 11:56 PM
ဂွင်းမထုတဲ့ ဘုန်းကြီး ဆော်မချချင်တဲ့ ဘုန်းကြီး ရှိရင် ပြပါ.. ဘာသာရေးဆိုတာ သတ်မှတ်ချက်ပဲ... နောက်ဆုံးတော့ ဆောက်အပိုလုပ်တွေ .... ခွဲခွဲခြားခြား မမြင်သ၍ တော့ တစ်သက်လုံး ငတုံး အလုပ်ကိုသာလုပ်ကြ ...
April 22, 2011 12:24 AM
ငါလိုးကောင် အထက်မှာ ငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ဂွင်းထုတာ လိုးတာဟာ လူသားတွေရဲ့ ရိုးရာပါလို့ ပြောပြီးပြီ။ လီးမို့ ဟိုလူဒီလူ ခွဲခြားပြောနေရတာလဲ။ မင်းစာကို ရှင်းအောင်ဖတ် ပြီး နားလည်အောင်ရေး။ တဏှာပိုးတွေနဲ့ ရွတိုးတိုးဖြစ်နေတဲ့ ငါတို့ ပုထုဇဉ်လူသားတွေ အမှားတွေလုပ်မယ် အမှန်တွေပြုမယ်။ ဒါဟာ သဘာဝ မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ပြန်ကြည့် ဂွင်းမထုတဲ့ကောင်လား မလိုးတဲ့ကောင်လား? အဲသလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ မင်းဟာ ...... ။။
April 22, 2011 12:42 AM
ဟားဟားဟား ဒေါက်ချက်ရေ အားပေးနေတယ် ကော်မင်န့် တွေဖတ်ပြီးရတဲ့ အသိကတော့ရွှေကိုကိုတွေဘုန်းကြီးတွေကိုထိလို့ နာနေဋ္ဌကသဗျာ ဘုန်းဋ္ဌကီးတွေမှာလဲ လီးနဲ့ ပဲ လိုးတာဆန်းသလား အဲ့ လိုမျိူးတွေများ၂သာတင် သူ့ ဘာသာလိုးတာ ပြီးရင် အလိုးခံရတဲ့ သူသာ ဗိုက်မဋ္ဌကီးဘို့ ဝိုင်းဆုတောင်းပေးဋ္ဌကစို့ ဘုန်းဋ္ဌကီးဆိုတာ လီးပါတဲ့ လူသားပါပဲ ဘုရားမှမဟုတ်တာ
April 22, 2011 1:12 AM
လီးပဲကွာ။ လုံးဝ မဖျက်ဘူး။ ဘုန်းကြီး အချင်းချင်း လိုးနေတဲ့ ဖိုင်တွေလဲ ငါ့ဆီ ရောက်လာပြီ။ ထပ်ကို တင်ဦးမှာ ကော်နက်ရှင်မကောင်းသေးလို့။ မင်းတို့ ဘုန်းကြီးတုတွေ (အစစ်များမပါ) အားလုံးကို လီးပဲ......
April 22, 2011 3:15 AM
ချက်ကြီး အမေကို ငါကိုယ်တိုင် လိုးခဲ့တာပါကွ
April 22, 2011 3:20 AM
နောက်ဆုံးတော့ ချက်ကြီးဆိုတာ ဘုန်းကြီးလိုးလို့ မွေးလာတဲ့ မျိုးဖျက် ကလေက၀လေးပါလား။ ဒီကောင်ကို လိုးသတ်ရမှာ သနားစရာတောင် မရှိဘူး။ ဟေ့ ကောင် ချက်ကြီး ၀က်လီးနဲ့တောင် မင်းမတန်ဘူးကွာ
April 22, 2011 3:47 AM
(၁)မဆင်ခြင်ပဲတင်တဲ့ချက်ကြီး လီးပဲ (၂)ဒီမူဗွီကိုအားရနေတဲ့ကောင်တွေကို လီးပဲ (၃)မူဆလင်နဲ့ခရစ်ယာန်တွေကိုလီးပဲ (၄)မဖျက်မချင်းချက်ကြီးကို လီးပဲ (၅)ငါ့ကိုလာဆဲဦးမယ့်ကောင်တွေကို ကြိုပြီး လီးပဲ
April 22, 2011 4:23 AM
မင်းလဲလာကြည့်သရွေ့ လီးပဲ မင်းလာတာဘယ်နခေါက်ရှိပီလဲ အပေါ်က လဒ
April 22, 2011 6:07 AM
April 22, 2011 7:45 AM
blogger အူရှီး ချက်ကြီးကို ပဲ အပြစ် တင်ချင်တယ်. သူဖာသာ နေတဲ့ ပလူအုံကို တုတ်နဲ့သွားထိုး လို့လီး လိုလို မှိုလိုလို ပုံစံတူလေးလို့မပြောနဲ့တော့ သားကြီးရာ မြန်မာတွေကို အသရေ ဖျက်နေတဲ့ မအေလိုး ကုလားလား ဒါမှမဟုတ် အူတူတူ အတတ ငနဲချက်ကြီးလား ပြောတော့ ချက်ကြီးကို ရွာဦးက ဘ ဘုန်းကြီး ပေးတာလို့ပြောနေပြီး ဖားမ ယိုးဒယားမတွေကိုလည်း မြန်မာမ ဆိုပြီး သိက္ခာချနေတဲ့ မင်း လုပ်ရပ်ကို ပြန်ကြည့်ဦးကွာ.. ကိုယ်ဖာသာ ကြည့်ဘို့ဆိုရင်လည်း ဘယ်သူမှ ဘာမှ ပြောမနေတော့ဘူး.. Public ကို ဖွင့်ပေးထားလို့အခုလို ပြောနေရတာ သားကြီး
အပေါ်က လဒ ဒေါက်ချက်ကိုမဆော်ကားနဲ့ နော် ဘဟ်သူကအတင်းဝင်ဋ္ဌကည့် ခိုင်းနေလို့ လဲ ဘာမတွေပဲဖြစ်၂ နာမနေနဲ့မြန်မာမတွေများအထင်ကြီးနေသေး ဘယ်အပျိူရဲ့ အဖုတ် စစ်တာရှိလဲ အပေါ်နားက အလာရှင်နဲ့ယေရှူ့ ကိုဆဲတဲ့ ကောင် ငရဲအိုးထဲဇောက်ထိုးကျမယ်နော် ဘုန်းဋ္ဌကီးဆိုတာလီးပါတဲ့ လူသားပါဆိုတာ လက်ခံလိုက်စမ်းပါ ဒီလိုမှနားမလည်သေးရင် ဘုန်းဋ္ဌကီးတွေအားလုံးလီး မင်းလိုက်ဖြတ်ပေးလိုက် တောင်ဋ္ဌကီးကငါ့ အိမ်ဘေးကဘုန်းဋ္ဌကီးဆို မိန်းမ၅ယောက်နဲ့ အလှည့် ကျအိပ်တာကွ မင်းလီးထက်တော့ ဋ္ဌကီးတာပေါ့ 
ဘော်ဒါတို့ ချက်ကြီးကိုဆဲနေလည်း အရေးပါမှမဟုတ်ဘူး.. အကယ်လို အခွင့်အရေး ရလို့ ကုလား မြန်မာ အရေးခင် ဖြစ်ခဲ့ရင် ငါတို့ ကုလာမတွေကို မုဒိန်းကျင့်ရအောင်... နောက်ပြီး မြန်မာ ပြည်ထည်း ကျူးကျော်လာတဲ့ ကုလားတွေ ခေါင်းဖြတ်ရအောင်... မလေးရှားနဲ့ အင်ဒိုနီရှားလို ကုလားနိုင်ငံ အဖြစ်ခံမလား.. ဒါမှမဟုတ် ငါတို့ က ကြိုတင်ပြီး နှိူမ်ထားမလားဆိုတာ သေချာလေးတွေး.. ငရဲကြီးရင်တောင်. ငါတို့ နောင်လာနောင်သားတွေ ကုလားရန်ကို နှိမ်နှင်းပေးသွားခဲ့တာ.. သိပ်ဂရုမစိုက်သင့်ဘူး..
April 22, 2011 10:31 AM
မိန်းမ လေးယောက်ယူတဲ့ကုလား ကိုခေါင်းဖြတ်ပြီး.. သူ့မိန်းမ တွေကို မုဒိန်းကျင့်လိုက်.. ဒါဆို နောက်ပိုင်းကုလာတွေ ဒို့မြေပေါ်လာရဲတော့မှမဟုတ်ဘူး.. ဒို့မြေသန့်ရှင်းဖို့ အတွက်.. ဒို့သွေး တွေနည်းနည်းတော့ ညစ်ညမ်းသင့်တယ်... online ပေါ်တတ်ဆဲနေတာ ထက်စာရင် အခွင့်အရေးကို အသုံးချ ကြပါ.. တချိန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခွင့်အရေး ကိုယူပြီး.. ကုလားမျိုးနွယ်ကို ဖြောက်ကျပါ.. ကုလားကို မမုန်းပါနဲ့.. ဒါပေမယ့် ကုလားကို ဒို့မြေပေါ်လည်း ခြေချမခံ ပါနဲ့..
April 22, 2011 10:36 AM
Min dot Burma ma tway ko ta mone lo htar del NGar dot Ka lar kwa Tar Mway mhar kyi lite . Min dot Burma ko paw tin south kyout yite tar . Min dot Burma ma tway ko paw tin fuck tar kwa..adar dot KA lar kwa.. MA A LO Burma myo tway by Ka Lar
April 22, 2011 11:16 AM
ချက်ကြီးကို အမေ အားပေးတယ်
မိုဟာမက်ဆိုတဲ့ မုဒိမ်းကောင် အဒေါ်အရင်းကို အသေလိုး ၊ ကုလေးမ အာဒီရှာကို စောက်ပတ်ယက်ပြီး .. မတန်မရာ တမာန်တော်လို့ ပြောသေးတယ် . လီးပဲ.. ။ ခွေးလီးကို ခေါင်းပေါ်တင်တဲ့ ကုလားတွေကို သတ်ပစ်ရမယ်။ ကားစင်တင်ပြီး အသတ်ခံရတဲ့ မသာကို တမန်တော်လို့ကိုးကွယ်တဲ့ကောင်တွေကရှီသေးတယ်။ သူ ကမှ သူများအသတ်ခံရတာ ဘယ်သူ့ ကို သွားကယ်မှာလဲ ..... မင်းတို့ ညီမ ငါလိုးထားတယ်...... ဗိုက်မကြီးအောင် ရှီသမျှတမန်တော် ကယ်ပေးလိုက်ကြပါ။
April 22, 2011 12:06 PM
သူများတွေ ဆဲ သလိုတော့ မဆဲချင်ပါဘူ ဗျာ ဒါပေမဲ့ ဘာသာ တရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆင်ခြင် သင်ပါတယ် မွတ်ဆလင်လဲ လူပါပဲ ဒီလို လုပ်ဖို့ ဘယ် ဘုရား ကမှ မဟောခဲ့ပါဘူး ရှေက ဆဲ့နေတဲ့ ချက်ကြီးရေ မင်းကြောင့် မင်းအမေ မိန်မပျက် သာသာ ဖြစ်နေတာကို မင်းနားလည်သင့်ပါတယ် မင်းမွတ်ဆလင် ဖြစ်လဲ မင်ဘာသာ ကိုသာ ယုံကြည်စွာ ကိုးကွယ်ပါ သူများတွေ ကို တိုက်ခိုက်ဖို့ မင်းတို့ ဘုရားဟောခဲ့လို့လား မင်းသေချာ စဉ်းစားပါ ငါလဲ မွတ်ဆလင်တယောက်ပါပဲ
ဆုံးမကိုးကွယ်မှုတွေ ဘာသာတရားတွေသာမရှိရင် မင်းတို့တွေ ဒီခေတ်အထိ တိရစာန်တွေလို လမ်းဘေးမှကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး စောက်ဖုတ်မြင်တိုင်း လိုးနေဦးမှာပဲ ..အမေတွေ အမတွေကိုပါချန်မှာမဟုတ်ဘူး ..။ ချက်ကြီးအပါအ၀င် ဒါကိုတင်ဖို့အားပေးတဲ့လူတွေ ချေးမကုန်းနဲ့၊ အ၀တ်မ၀တ်နဲ့ လမ်းမှာလျှောက်သွားပြီး မင်းတို့အမေတွေ ညီမတွေကိုလိုးပြီး မူဗီရိုက်ပြီး တင်ရဲလား ..
April 22, 2011 1:07 PM
မင်းတို့မုဒိန်းကျင့်မယ်ပဲပြောနေတယ် ထောင်ထဲမှာမုဒိန်းကောင်ဆို ပြန်ဖင်ခံရတယ် မယုံရင်မုဒိန်းမှု့နဲ့ဝင်လာကြည့်
April 22, 2011 1:10 PM
တကယ်လို့ မင်းတို့က ဘာသာခြားတွေအဖြစ် အဲဒီဖိုင်တင်တယ်၊ တင်တာကိုအားပေးတယ်ဆိုရင် ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတွေလိုးတာ၊ ခရစ်ယာန်သီလရှင်နဲ့ ခွေးနဲ့လိုးတာ၊ မြင်းနဲ့လိုးတာတွေ ၊ယူအေအီးမှာမွတ်ဆလင်တရားဟောဆရာက သူ့သမီးအရင်းကို ပါကင်ဖွင့်တာတွေ ငါ့မှာ အကုန်ရှိတယ်...online ပေါ်မှာလည်းအများကြီး မင်းတို့ ဗုဒဘာသာဘုန်းကြီးနဲ့ ဒကာမ လိုးတာတွေ ရှာတင်လေ .. ဘယ်ဘာသာက အဲဒီလိုမူဗီတွေများလဲဆိုတာ မင်းတို့အသိဆုံး..။ ဘုန်းကြီးတွေ၊ သီလရှင်တွေ၊ တရားဆရာတွေလိုးတာတွေချည်းပဲ ငါ ဘလော့တစ်ခုဆောက်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်းတင်ပေးမယ် .. ဘယ်ဟာ ပိုများလဲ ငါ စီဒီတွေပွားပြီး ရန်ကုန်က ဗလီတွေရှေ့၊ ချက်ကျောင်းရှေ့တွေမှာသွားရောင်းခိုင်းမယ် ...... မင်းတို့..စိန်ရဲ့လား. .ငါ့အိုင်ပီကိုကြည့်လိုက် ငါဘာကောင်လဲသိမှာပါ ..ငါ..ပြည်တွင်းမှာရှိတယ်.. ရခိုင်မှာ မင်းတို့ကို နှိပ်လာတဲ့ကောင်ကွ..မင်းတို့ စိန်လား....
April 22, 2011 1:29 PM
စိန်တယ်ဟေ့ကောင် ချက်ကြီးကို လာဖြီးမနေနဲ့ဖြဲချောက်မနေနဲ့မင်းတို့ မှာရှိရင်တင်လေ ချက်ကြီးကတော့ ရှိလို့ တင်တယ်.. မဖျက်ဘူးကွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကြီးပေမဲ့ ချက်ကြီး မူဆလင်စစ်စစ်ဟေ့
April 22, 2011 2:47 PM
အပေါ်က ငါ့မယားပါသားလေး ဘာလို့ ထထအော်နေတာလည်း မင်းမလည်း တနေ့ နေ့ သူများလုပ်တာကြည့်လိုက်ဂွင်းထုလိုက်နဲ့ ဒါနဲ့ ပဲသေတော့မယ် မင်းဘာသာမူဆလင်မကလို့စပါကလင်ဖြစ်ဖြစ်ကွာ နားညီးတယ် မင်းအမေလည်း အိပ်သွားပြီ သွားအိပ်တော့
April 22, 2011 3:26 PM
ကိုချက်ကြီး ကျနော် အနောနမတ်စ်နဲ့ ကော်မန့်ပေးလို့ ဘာသဘောမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကော်မန့်တွေအားလုံးကို ကျနော်သေချာဖတ်ခဲ့တယ်။ တစ်ချို့တွေပြောသလို လူတိုင်း အယုတ်အမြတ်မရွေး ဒါလုပ်လို့ ဒါတွေထွက်လာကြတာပဲ။ ဒီဆိုဒ်ကို သူငယ်ချင်းတွေဆီက သိခဲ့တယ်။ နောက် မကြာမကြာလာကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဟာတွေကြည့်တိုင်း ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာနေကြတာမှ မဟုတ်တာ။ ကျနော်တို့တွေ တိတ်တိတ်လေးကြည့်တယ်။ တိတ်တိတ်လေးအာသာဖြေတယ်။ လူတွေရှေ့မှာ ကိုယ်တိုင်ဟန်ဆောင်ကောင်းရတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်း အချင်းချင်းသိတယ်။ ကျနော့်အရင်ရည်းစား သူ့အရင်ရည်စားနဲ့အိပ်တယ်။ ကျနော်လဲ ကျနော့်အရင်ရည်းစားနဲ့အိပ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ လူရဲ့စံတစ်ခုအရ မသိသလိုနေကြတာ အာရှဆိုတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာသာမက အနောက်ပြည်တွေမှာပါ စံထားထားပါတယ်။ ဒီဗူဗီကို တင်လို့လဲ ဗုဒ္စဘာသာကို အထင်မသေးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော် ဗုဒ္ဒဘာသာကို နားလည်ပါတယ်။ ဒီပိုစ်ရဲ့ထိပ်မှာ ရေးထားတဲ့ဘုန်းကြီးစာတွေအရ ကိုချက်ကြီးဟာ မူဆလင်ဖြစ်ခဲ့ရင် အဲ့လောက်မရေးတတ်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ တစ်ချို့ပြောသလို မှန်ပါတယ်။ အကျင့်ပျက်နေတဲ့ ဒီသာသနာခေတ်ပြတ်မှာ သာသနာက စုတ်နေမှာပါ။ ဒီတရားတော်ကိုလဲ ဆရာတော်တစ်ပါးဟောထားတဲ့တရားမှာ နားယူနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ဒီကော်မန့်ကိုဘာလို့ပေးတာလဲဆိုရင် ကျနော်ဟာ ၂၀ နှစ်ပါအကို။ နင်လူကောင်းလုပ်ချင်ရင် ဒီဆိုဒ်ဘာလို့လာလဲလို့ တချို့တွေမေးရင် ကျနော်ဟာ တဏှာကောင်ပါ။ စိတ်ခံစားမှုအရ ညံ့ဖျင်းယုတ်နေချိန် ဒီဆိုဒ်ကို ရောက်လာတတ်တယ်။ အမြဲတမ်းမှ ကျနော်တို့စိတ်ဟာ ယုတ်ညံ့နေတာမှမဟုတ်တာ။ တစ်ချို့တွေ ရင့်ကျက်နေတဲ့ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွေ ဒါကိုဘာမှပြောသွားမှာမဟုတ်ဘူးအကို။ ငရဲလဲကျကျစေတော့ဆိုပြီး အဆုံးထိဖတ်ခဲ့တာပါ။ ဗူဗီကိုတော့ အစပိုင်းလေးကြည့်ပြီး မကြည့်တော့ပါဘူး အကို။ ဒီမှာ ပေးတဲ့ကော်မန့်တွေ အားလုံးလဲ အစစ်အမှန်တွေဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါ။ ဒါကြောင့်လဲ ဘာသာတရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခု လွယ်လွယ်တော့ မပုတ်ခတ်ပါဘူး။ အဲ့တော့ကော အကိုရယ်။ ဒီကော်မန့်တွေကြောင့် အကိုမပျော်ဘူးဆိုရင် ဒီဗူဗီတင်လို့ အကို စိတ်ညစ်သွားတယ်ဆိုရင် အကို မဖျက်သင့်ဘူးလား အကို။ အကို ဒီဗူဗီကိုတင်လို့ ပျော်လို့လား? ပြီးတော့ ဒီမူဗီကလဲ အပြင်မှာကြားရသလောက်ဆိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ မြို့မှာဆို ကျောင်းထိုင်လုပ်တာ နှစ်တွေမနည်းတော့ဘူး အဲ့ပုတ်ကိုယ် ခလေးတွေ တိတ်တိတ်မွေးပြီး မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတာ နှစ်တွေကြာမှ သိရတယ်။ ဒါအဖြစ်မှန်ပဲ။ အဲ့တော့ ဘာဖြစ်သလဲ? သာသနာရဲ့အစစ်အမှန်တွေလဲ ရှိတယ်။ ခရိယန်ဘာသာမှာလဲ ပုပ်ရဟန်းမင်းဟာ အလွန်ကြည်ညိုဖွယ်ရာပါ။ နောက် မွတ်စ်မှာလဲ ဘာသာရေးအရ ကိုင်းရှိုင်းတဲ့ပုတ်ကိုယ်တွေရှိမှာပါပဲ။အဲ့တော့ကော အကိုရယ်... ဗဟုသုတရဖို့ဆိုရင်လဲ ဒိထက်ဆိုးတဲ့အဖြစ်တွေကို ကျနော်တို့တွေသိလို့ သိပ်ပြီးထူးဆန်းနေမှာ မဟုတ်သလို၊ အကို့အတွက်လဲ ဘယ်ဖက်ကကြည့်ကြည့် မကောင်းပါဘူးအကို။ အကို ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် အကယ်၍ တစ်နေ့ အကို့ကို အပြင်မှာ အကိုက ဘယ်က ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဆိုပြီး သိသွားခဲ့ရင် ဘယ်သူအတွက်မှ မကောင်းတဲ့ ရလဒ်တွေကလဲ အဝေးမှာရှိနေတာပဲအကို။ နာမယ်ကြီး အနောက်တိုင်းporn sites တွေမှာတောင် အကို ဒီလို ရှာတွေ့ပါ့မလားအကို။ ဘယ်သူပဲ မှန်မှန် ဘာသာရေးဟာ ဒီလိုနေရာမှာ မရှိသင့်ပါဘူး။ အကို ကျနော် မပြောချင်တဲ့ လူတွေအားလုံးကိုယ်စားရော ဒီဆိုက်ကို လာလည်တဲ့လူတွေရဲ့ကိုယ်စားရော အကို အခုစိတ်ညစ်မနေဘူးလား အကို။ စိတ်ထဲရှုပ်နေရင် အကို ဒီပိုစ်လေးကို ဖျက်မပစ်သင့်ဘူးလား အကိုခင်ဗျာ။ ကျနော် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လို့ ဖျက်ခိုင်းနေတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီထက်အရှက်ရစရာတွေ သာသနာ့ဆုတ်ကပ်မှာ အပြင်လောကထဲ အများကြီးပါ။ ဒီကော်မန့်ကိုလဲ လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောလိုက်တာပါ။ ကျနော်တော့ စိတ်ရှုပ်သွားပါတယ်။
April 22, 2011 3:51 PM
ထောင်ဝါဒန် said... မင်းတို့မုဒိန်းကျင့်မယ်ပဲပြောနေတယ် ထောင်ထဲမှာမုဒိန်းကောင်ဆို ပြန်ဖင်ခံရတယ် မယုံရင်မုဒိန်းမှု့နဲ့ဝင်လာကြည့် --- အုပ်စုလိုက် အရေးခင်လိုမျိုး တွေမှာ မုဒိန်းကျင့်ရင် ထောင်ထည်းမ၀င်ရပါဘူး.. Indonesia riot ကိုပြန်ကြည့်ပါ...မူဆလင်နိုင်ငံဖြစ်သွားတော့ တခြားဘာသာခြားတွေကို မုဒိန်းကျင့်ပါတယ်... အုပ်စုနဲ့ ကိစ်စမလို့ ဘယ်သူမှ တရားမဆွဲပါဘူး.....ဒီမှာက မြန်မာအင်အားစုကပိုများပါတယ်.. ဘယ်သူက မုဒိန်းကျင် ဘယ်သူက သတ်သွားမှန်းမသိအောင် လုပ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်.. မုဆလင်မတစ်ယောက်ကို မြန်မာဆယ်ယောက်နှူန်းလောက်ဆိုရင် ထောင်တောင်မလောက်ပါဘူး.. မြင့်မြတ်သောမြေမှာ မူစလင်မရှိပါစေနဲ့..
ချက်ကြီး သတ္တိရှိလား မင်းဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် လိပ်စာကို ဖော်ပြလိုက်။ မင်းဘ၀ ရက်မခြားစေရဘူး။ ဒီလောက်ယုတ်မာ အောက်တန်းကျတဲ့ကောင်။ လူသားတွေကို ကာမမိုက်မှောင် သွင်းနေတဲ့ကောင်။ သမိုင်းကို အမဲစက်စွန်းတဲ့ကောင်ကို ရှင်လင်းဘို့ တာဝန်က သမိုင်းပေးတာဝန်ဘဲ။
April 22, 2011 7:35 PM
ကိုရဲ said: ကိုချက်ကြီး... လုံးဝမဖျက်နဲ့. ပြောချင်တာက မီးကိုစက္ကူနဲ့အုပ်ထားလို့မရဘူး.. ဒို့မြန်မာတွေကသိတဲ့အတိုင်း အမှန်တရားဆိုဆတ်ဆတ်ထိမခံ။ သုတို့မမြင်ချင်တိုင်းဖျက်ကြေးဆို.မန္တလေးက ဖုန်ကြီးဂိုဏ်းတွေ လုပ်နေပုံတွေ သူတို့အရင်သွားတားလေ.သာသနာကိုအပြင်မှာတကယ်စော်ကားနေသူတွေအရင်လိုက်အရေးယူလေ..လုပ်တဲ့သူကလုပ်လို့တင်တဲ့သူကတင်ပြီ. အမှားကိုရဲရဲတင်းတင်းမီးမောင်းထိုးပြတဲ့ကိုချက်ကြီးမှန်တယ်. အမှားကိုအမှန်မပြင်နိူင်ပဲ အစိုးရစိတ်မမွေးကြနဲ့ဗျာ။ Movie Comment မပေးခင်ကိုချက်ကြီးရဲ့အမှာစကားကိုလဲပြန်ဖတ်ကြဦး။ အမှားကိုရဲရဲတင်းတင်းမီးမောင်းထိုးပြတဲ့ကိုချက်ကြီးမှန်တယ်.
April 22, 2011 7:59 PM
ဘယ်ကောင်တွေ ဘာပဲပြောပြောကွာ...မူဆလင် တွေ စောက်ကုလား တွေကို လီးပဲကွာ..........မအေလိုး ကုလား မူဆလင်တွေ...
April 22, 2011 8:03 PM
ငါလိုးမသား ချက်ကြီး ကိုယ်မေကိုယ်လိုး ကောင် မင်းဖာသာ မွတ်ဆလိမ်ဖြစ်ဖြစ် ဘာဖြစ်ဖြစ် လီးပဲကွာ
ငါလိုးမသားတွေ ချက်ကြီးက ဘာသာမရှိဘူးကွ။
April 22, 2011 10:14 PM
မင်းအဘမုဒိန်းကျင့်မလို့လူစုနေတာလား မင်းလိုကောင်တယောက်မှမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူး တခြားသွားရှာ
April 22, 2011 10:18 PM
April 22, 2011 10:35 PM
မူဆလိန်ကိုမုန်း၇င်မူဆလိန်မကိုယူပြီးလူမျိုးဖျောက်ပါ။မယူနိုင်ကလိုးပြီးထားခဲ. ပါ။ဒီနေ.ကစပြီးနီးစပ်၇ာမူဆလိန်မတွေကိုဖန်ပြီးလိုး၇န်မူဆလိန်အလိုမ၇ှိသူ များတာဝန်။အေ၇းအခင်းကြုံလာ၇င်မူဆလိန်ခွေးတွေအပျောက်ဆော်၊မူဆလိန် မတွေကိုမုဒိမ်းကျင်.ဖို.လက်မနှေးနဲ.
April 22, 2011 11:08 PM
ချက်ကြီး ဒီနေ့မနက်အစော ၆ နာရီတွင် ဘဝတပါးကူးပြောင်းသွားပါသည်။ ဆဲဆိုသူများဒဏ်ကြောင့် စားမဝင် အိပ်မပျော်ဖြစ်ကာ နောက်ဆုံး တနေ့လုံးတညလုံး ဂွင်းထိုင်တိုက်ကာ မနက်မိုးအလင်း၌ နှလုံးဖောက်ပြန်ပြီး အားကုန်အားပြတ်ဖြစ်ကာ ကွယ်လွန်သွားခြင်းဖြစ်၏ ။ ချက်ကြီးမှန်းတိုက်သော စောက်ဖုတ်မှာ ဩစတြေးလျမှ မြန်မာမလေး၏ စောက်ဖောက်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြားလိုပါသည်။ သူ၏ပုံများဖျက်ပေးလျှင် ပုံအသစ်များထပ်မံပို့ပေးမှာဖြစ်ပြီး လာမည့်စက်တင်ဘာလ၌လည်း မြန်မာပြည်ပြန်လာလည်ရာတွင် ကိုချက်ကြီးအား တဝကျွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကမ်းလှမ်းထားခံခဲ့ရသည်။ ဘုန်းကြီးမူဗီကလစ်အား မဖျက်ပေးသော်လည်း ဩစတြေးလျမှ ရွှေမလေး၏ စောက်ဖုတ်ပုံများ ဖျက်ပေးသော ချက်ကြီး ကောင်းရာသုဂတိ လားနိုင်ပါစေ။ ဘဝဆက်တိုင်း နာမည်ကြီးပွန်းဘလောကာကြီးဖြစ်ပြီး တဝလာကျွေးသောစောက်ဖုတ်များအား အသက်မထွက်မှီ အမြဲစားနိုင်ပါစေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သားများမှ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါသည်။
April 23, 2011 4:51 AM
အခုဟြေနေတာ ဒေါက်တာချက်ကြီး လုံးဝမဟုတ်ပါ, ကိုရဲပါ. ဘယ်သူမဆို name & URL ရိုက်လိုက်ရင် ချက်ကြီးလိုလိုဘာလိုလို comment ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့.. ကိုချက် ဟာ မွတ်စလင် ဖြစ်တယ်ဆိုတာတခြားသူ၇ဲ့ လုပ်င်္ကြဇာတ်ဖြစ်နေပြီပေါ့.(maybe) ပိုပြီးအမုန်းပွားအောင်လုပ်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ DRချက်ကြီးဟာ cbox နှင့် comment များတွင်လုံးဝ ပါဝင်ရေးသားခြင်းမရှိပါ ဆိုတာကိုထပ်တလဲလဲဟြေပြီးသားပါ... blog များမှာဒီလိုလုပ်ကြံရေးသားလို့ရတာကျွန်တော်ပြတာပါ.identity theft မဟုတ်ပါ. ကိုချက်ကြီးရေ. ဦးနှောက်သုံးကြဦး.. ၀ါဝါမြင်တိုင်း..ရွေမထင်နဲ့ ပုံ ကိုရဲ
April 23, 2011 7:44 AM
April 23, 2011 7:52 AM
ချက်ကြီး အတု အစစ် စမ်းသပ်ကြည့်တာပါ
ဟုတ်ပါတယ်။ မည်သူမဆို Name/ URL ကို ရွေးပြီး Name မှာ ဒေါက်တာချက်ကြီး URL မှာ http://drchatgyi.blogspot.com ကို ရိုက်ထည့်ပြီး ကွန်မင့်ပေးကြည့်ကြပါ။ ဒေါက်တာချက်ကြီး ကွန်မင့်ပေးတယ်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာမှာပါ။ ဒါကြောင့် အပေါ်က မွတ်စလင် ဒေါက်တာ ချက်ကြီး ဆိုတာတွေက လူတိုင်း အတု လုပ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စ တခုပါ။
ယခု စာရိုက်နေသူမှာ အတု ဖြစ်ပါသည်။ လူတိုင်း ယခုလို ကိုယ်တိုင် လုပ်ကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ကြည့်စေချင်ပါသည်။ (ပုံ) ဒေါက်တာချက်ကြီး အတု (စမ်းသပ်သူ)
ဒေါက်တာ ချက်ကြီး said...
ငါလိုးမချက်ကြီး ငါကွ ချက်ကြီး
April 23, 2011 10:08 AM
ကိုရဲ said: ကျွန်တော်ဟြေတာလေးကို နားလည်ပေးကြတဲ့ညီအစ်ကိုများကျေးဇူးအထူီးကိုချက်ကိုအမှန်အကန်အားပေးနေတယ်. သတိ..၀ါဝါမြင်တိုင်း..ရွေမထင်နဲ့
ငါလိုးမ ချက်ကြီး မင်းဖာသာ ဘာရေးရေး မွတ်ဆလိမ်ဖြစ်ဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ် ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ် ဒီပိုစ့်ကို ဖျက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတာကွ။ မဖျက်မချင်း လီးပဲကွာ ငါလိုးမသား ငချက်
ဘယ်ကောင်လဲကွငါ့နာမည်ယူသုံးတာ တိုက်ပိတ်လိုက်ရ ဟွန်း ဟွန်း
April 23, 2011 11:37 AM
April 23, 2011 11:39 AM
ခင်ဗျားတုို့က ချက်ကြီးကုို ဘာလုို့ ဒေါပွရတာလဲ။ ဒေါပွရမှာက ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို ရဟန်းသံဂါလုို့ ပြောပြီး အပြာကားကြည့်နေတဲ့ ရဟန်းမစစ်တွေ ဒါယိကာမတွေနဲ့ ညိစွန်းတဲ့ ရဟန်းအတုတွေပါ။ ရဟန်းဆုိုတာ ရဟန်း အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ လူဝတ်ကြောင်တွေက လှူထားတဲ့ ထမင်းကုို စားပြီး ဘုရားထားခဲ့တဲ့ တရားတော်တွေကုို လက်ဆင့်ကမ်းနုိုင်ဘုို့ ကျင့်ကြံအားထုတ်ရပါတယ်။ အဲဒီလုို အလုပ်မလုပ်ပဲ လူဝတ်ကြောင်အလုပ်ကုို လုပ်နေတဲ့ ရဟန်းအတုတွေ ရှိကြောင်းကုိုလဲ တာဝန်သိစွာ ဖေါ်ထုတ်သင့်ပါတယ်။ ဒီအပြာကားဟာ ရဟန်းအစစ်တွေနဲ့ လုံးဝ မဆုိုင်ပါ။ ဗုဓ္ဒဘာသာကုို စော်ကားတယ်လုို့လဲ မမြင်ပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တစ်ယောက်ပါ။ ဒီကားကုို ချက်ကြီးက စေတနာနဲ့ ပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ ပြသတယ်လုို့ မြင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတုို့ စစ်ကုိုင်း မန္တလေး နေဘူးလား။ အဲဒီမှာ ဥိးပဇင်းတွေနဲ့ ဒါယိကာမ ညိစွန်းတာ၊ ဦးပဇင်းနဲ့ မယ်သီလရင် ညိစွန်းတာ မရေမတွက်နုိုင်ဘူး။ ကျုပ်တုို့ ငယ်ငယ်က ဆုိုရင် ဘုန်းကြီးနဲ့ မယ်သီလရင် လုိုက်ပြေးတာ ခဏခဏ မြင်ဘူးသဗျို့။ အဲုဒီတော့ ဒီဇာတ်ကားတင်ပေးတဲ့ ချက်ကြီးကုို အပြစ်မတင်နဲ့။ တင်ချင်းတင် ဘုန်းကြီးအလုပ် မလုပ်ပဲ မဟုတ်က ဟုတ်က လုပ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကုို ရှာပြီး တင်၊ ပြီးရင် လူဝတ်လဲခုိုင်း။ အဲဒါက ပုိုပြီး တရားမျှတမယ်။ စစ်ကုိုင်းသား
April 23, 2011 11:46 AM
Mg MG Ka lar said...
kel , Min dot Burma ma tway ko Yakhine mhar Rape lote tar , Bel kg fan lae pyaw Le bel , Rape lote ome mhar , Ygn mhtar min dot burma tway yaw,Burma ma tway yaw .. Ta myo lone rape lote mhar BY KA LAR
April 23, 2011 12:13 PM
ငါလိုးမသား စစ်ကိုင်းသားကလည်း ပေါက်ကရလာပြောနေပြန်ပီ။ ဘုန်းကြီးနဲ့ ဒကာမလိုးတာ ရှိချင်ရှိမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပွန်းဆိုက်မှာ တင်စရာလား။ အဲတာဆို မင်းအဖေနဲ့ မင်းအမေလိုးတာကို တင်မယ်ကွာ။ မင်းနှမနဲ့ မင်းယောက်ဖလိုးတာကို ချက်ကြီးဆိုက်မှာ တင်မယ်။ မင်း အဆင်ပြေလား။ ငါလိုးမသား ယုတ်တိရှိတိုင်း တင်စရာလားကွ။ တကယ်ဖြစ်တိုင်း တင်ရမယ်ဆို မင်းမိဘတွေ လိုးတာ အရင်တင်လိုက်။ လီးပဲ
April 23, 2011 12:42 PM
အလကားနေရင်းးး အွန်လိုင်းမှာ ရန်ဖြစ်မနေကြနဲကွာ... ဇ ရှိရင်... စိန်ခေါ်ပီးး ဖိုက်ကြ..... ဘလော့မှာလာပီးး မိုက်ရိုင်းပီး ဆဲမနေကြနဲ... ပုံ ဒေါက်တာချက်ကြီး
April 23, 2011 1:55 PM
မင်းတို့အကုန် ဒီမိုကရေစီနဲ့မတန်ဖူး ဒါ့ကြောင့် နောက်ကနေကြိုးကိုင်ပြီး ငါဆက်အုပ်ချုပ်နေတာ ပုံ သန်းရွှေ
ငါလိုးမသားကြီး ချက်ကြီး မင်းကို ဖျက်လို့ပြောနေတယ်မဟုတ်လား. .။ ဒီလောက် အမှန်တရားတွေ တင်ချင်နေတဲ့ကောင်တွေလဲ မင်းတို့ အဖေနဲ့ အမေလိုးတဲ့ ဗီဒီယိုကို ရိုက်ပြီးတော့ တင်ပါလား. . ။ အဲဒါပဲ အမှန်တရားပဲလေ ဘယ်လိုလဲ. . . ခွေးမသားတွေ ဦးနှောက်ကိုမရှိဘူး။
မပီးကျတော့ဘူးကွာ။ လီးပဲ ကြည့်စရာရှိတာကြည့်လိုက်။ ထုစရာရှိတာထုလိုက်။ ဘုန်းကြီးကလဲ လီးပဲ။ ကိုယ့်ဘယ်ကောင်ဗီဒီယိုရိုက်သွားလဲတောင်မသိဘူးလားမသိဘူး။ ငါလိုးမသားအားလုံးအရှိကို အရှိအတိုင်းလက်ခံကြ။ စောက်ပတ်ဘာသာရေးတွေနဲ့ ပုံးရှိုးကွယ်ရှိုးမလုပ်ကြနဲ့။ ဠီးပဲ။ ဘုန်းကြီးသူဟာသူလိုးတာဘာဖြစ်လဲ။ မင်းတို့ရှေ့လာလိုးပြနေရင် ရိုက်သတ်လိုက်ပေါ့။ ပုံကြီးချဲ့နေတဲ့ကောင်တွေ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ကောင်တွေ မင်းတို့ကဘယ်လောက်နားလည်လို့လဲ။ အဲဒီလိုကောင်တွေ အားလုံး စောက်ပဲဘဲ
April 23, 2011 7:21 PM
Min may lo lar? said...
min may lo larkwa.. Ko mae ko lo tway yel ko mae ko lo south pat sar na ma lo .. ar lone ko leee bel hay by ka lar lay ( doke gee )
April 23, 2011 10:53 PM
ဒါပေါ့ ကမ္ဘာမှာ အယဉ်ကျေးဆုံးတိုင်းပြည်ဆိုတာမရှိဘူး ကမ္ဘာမှလေအပစ်ဆုံးတိုင်းပြည်တော့ရှိတယ်
ချက်ကြီးဆိုက်က pageviews များတာနဲ့ သူ့ကိုယ်သူအောင်မြင်တယ်မှတ်နေတာပါ တကယ်တော့ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဆိုက်လိုပါပဲ ကိုယ်ပိုင်ပို့စ်က အတော်နည်းပြီး update လေးပုံမှန်လုပ်ပေး လင့်ခ်ချိတ်ပေးထားလို့ ကျနော်တို့လာကြည့်ဖြစ်နေကြတာပါ ချက်ကြီးဆိုက်မှာသတိထားမိလား @လူရမ်းကား @အလှစစ် စတဲ့ဟာလိုမျိုးတွေက ပိုများပါတယ် ပိတ်ထားတဲ့ဟိုတစ်နေ့ကဆို သူငယ်ချင်းတွေကိုမေးကြည့်တော့ သူမရှိတော့ တခြားးဆိုက်ကြည့်တာပေါ့တဲ့ အဖြေက ဒါပါပဲ ငါဟာ Total pageviews ပေါင်း ၇သန်းကျော်ရှိတဲ့ ဒေါက်တာချက်ကြီးဆိုက်ကို တည်ထောင်သူပါလို့ သူ့ကိုယ်သူမကြေငြာရဲပါဘူး အထက်ကတစ်ယောက်သောသူပြောသလိုပဲ ဖားမ ထိုင်းမတွေကို မြန်မာဆိုပြီးတင်နေတာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လည်း သူဟာ (ဝါသနာတူတွေအတွက် ဘယ်လိုပဲပွန်းဆိုက်ကိုထောင်ထောင်) မျိုးချစ်စိတ်မရှိသူတစ်ယောက်အဖြစ်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် ထပ်ပြီးတော့ ချက်ကြီးဟာ ပို့စ်တွေတင်တိုင်း အခါအားလျော်စွာ ဘဘုန်းကြီးပေးထားတဲ့နာမည် ဘာညာဆိုပြီးလည်း ဘာသာရေးနဲ့ရောထွေးတတ်ပါသေးတယ် ဒါဟာ ကျင်းထဲကိုတိုက်ရိုက်မသွင်းပဲ ဘောင်ပုတ်ပြီးသွင်းတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ် သူဟာရေရှည်စီမံကိန်းတစ်ခုကို ရေးဆွဲထားသူပါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြည့်လို့ရလို့ ပျင်းတဲ့အခါ ကျနော်တို့လာကြည့်ကြတယ် သူမရှိလည်း ကျနော်တို့အတွက်က ဒူးနှန့်နေလို့ရပါတယ်
April 24, 2011 1:51 AM
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပုဂံ အနော်ရဌာလက်ထက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို မယူဆောင်လာခင်ထိ မြန်မာတို့ရဲ့အယူဝါဒက အရီးကြီးဝါဒပါ လူပေါင်းများစွာသတ်ဖြတ်ပြီးထိန်းသိမ်းလိုက်ရတာပါပဲ သမိုင်းအစဉ်အလာကိုက တဏာကြီးတဲ့အမျိုးပါ ဒါကြောင့် page view များတာမဆန်:ပါ
April 24, 2011 3:39 AM
ငါလိုးမသားချက်ကြီးကို ပိုစ့်ဖျက်ဖို့ ပြောနေတယ်။ ကျန်တာ ဘာမှ စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ကျန်တာ ကြိုက်သာတင်ပါ။ အားပေးပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ရှုပ်ထွေးစေတာ မကောင်းဘူး။ လီးပဲ ချက်ကြီး
April 24, 2011 5:40 AM
ဆဲရတာမောသွားသူ ငါလိုးမသား လီးပဲ။ မင်းအမေကိုလိုးပြီး မင်းကိုမွေးထားရတာ လီးသနတယ်။ ခွေးပါးစပ်ကနတ်စကားထွက်လို့။ ဖာခန်းသွားတိုင်းခင်ဗျားကိုတွေ့တွေ့နေတယ်။ ဆိုသလိုမျိုးလာမပြောနဲ့။ မကြေနပ်ရင်လီးမှမကြည့်နဲ့။ မင်းမှာ ကြည့်ပိုင်ခွင့်ပဲရှိတယ်။ ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ နားလည်လား။ မင်းတို့လိုချီးဦးနှောက်ထဲမှာပဲ ဘာသာရေးရယ်၊ နိုင်ငံရေးရယ်၊ လီးရေးရယ်ကိုကွဲကွဲပြားပြားမမြင်တာ။ ပညာတတ်တွေက လိုးချင်ရင်လိုးချင်တဲ့နေရာကိုသွားတယ်။ ကျောင်းရောက်ရင် စာအကြောင်းပြောတယ်။ မင်းတို့လို ဖာတန်းသွားပြီး ဓမ္မစကြာတရားမဟောဘူးဟဲ့ နှမလိုးရဲ့။ အရှိကိုအရှိအတိုင်းကြည့် ပြီးရင်ပြန်။ ဖာခေါင်းစကားပြောမသွားနဲ့။ စောက်ပါးစပ်ကိုပိတ်။ ကိုယ့်လီးကိုကိုင်ပြီးညောင်း။
ဟင့် လူဇိုး သူညားကိုလာပြောနေတယ် ငါကဂေ:
ငါလိုးမသာ ချက်ကြီး လီးပဲကွာ။ ဖျက်ဆိုဖျက်စမ်း
April 24, 2011 8:01 AM
ဖျက်ဆိုဖျက်စမ်းပြောတာ ဘယ်နခါရှိပီလဲ ဟိုကမဖျက်ပါဘူးဆိုမှ ဇွတ်ပဲ
ဟာ ငါလိုးမသားချက်ကြီး အောက်ဆွဲတွေကလည်း မစားရ ၀ခမန်း ၀င်ညှော်နေပြန်ပီ။ လီးပဲကွာ ချက်ကြီး
ငါလိုးမလေးတွေ ငါလုံးကိုပြောချင်တာတစ်ခုရှိတယ်.. မင်းတို့ကောင်တွေ အကုန်လုံး ကိုလီးနဲ့ ထိုးချင်တယ်... ဒါပဲ
April 24, 2011 11:24 AM
dr.bigchat :D said...
san kyi tar hee
April 25, 2011 12:19 AM
April 25, 2011 1:29 AM
ချက်ကြီး ဒီနေ့မနက်အစော ၆ နာရီတွင် ဘဝတပါးကူးပြောင်းသွားပါသည်။ ဆဲဆိုသူများဒဏ်ကြောင့် စားမဝင် အိပ်မပျော်ဖြစ်ကာ နောက်ဆုံး တနေ့လုံးတညလုံး ဂွင်းထိုင်တိုက်ကာ မနက်မိုးအလင်း၌ နှလုံးဖောက်ပြန်ပြီး အားကုန်အားပြတ်ဖြစ်ကာ ကွယ်လွန်သွားခြင်းဖြစ်၏ ။ ချက်ကြီးမှန်းတိုက်သော စောက်ဖုတ်မှာ ဩစတြေးလျမှ မြန်မာမလေး၏ စောက်ဖောက်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြားလိုပါသည်။ သူ၏ပုံများဖျက်ပေးလျှင် ပုံအသစ်များထပ်မံပို့ပေးမှာဖြစ်ပြီး လာမည့်စက်တင်ဘာလ၌လည်း မြန်မာပြည်ပြန်လာလည်ရာတွင် ကိုချက်ကြီးအား တဝကျွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကမ်းလှမ်းထားခံခဲ့ရသည်။ ဘုန်းကြီးမူဗီကလစ်အား မဖျက်ပေးသော်လည်း ဩစတြေးလျမှ ရွှေမလေး၏ စောက်ဖုတ်ပုံများ ဖျက်ပေးသော ချက်ကြီး ကောင်းရာသုဂတိ လားနိုင်ပါစေ။ ဘဝဆက်တိုင်း နာမည်ကြီးပွန်းဘလောကာကြီးဖြစ်ပြီး တဝလာကျွေးသောစောက်ဖုတ်များအား အသက်မထွက်မှီ အမြဲစားနိုင်ပါစေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သားများမှ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါသည်။ ပုံ ချက်ကြီးအကြောင်းသိများ
မင်းဒီနေ့မနက်ကလဲ ဟိုတပတ်ကတည်းကပြောနေတာ ချက်ကြီးအသက်ဘယ်နှချောင်းရှိတုန်းဟ
General Than Shwe said...
သိရိလင်္ကာ အိုင်ပီနဲ့ လာရေးတဲ့ ကောင်တွေ အားလုံးကို လီးဘဲဟေ့။ ပြောတော့ ဘုန်းကြီး ပါလိတက္ကသိုလ် တက်နေတာ။ ပြီးတော့ အပြာဆိုက်လာကြည့်။ ကော့မင့်မှာက ဆဲထားသေးတယ်။ အဲဒီကောင်တွေအားလုံးကို လီးပဲဟေ့..........
April 25, 2011 12:11 PM
ကဲကဲဘုဉ်းကြီးတွေ တောထွက်တရားအားထုတ်သင့်ပီ မြို့ထဲမှာနေရင် အကျင့်ပျက်တယ်
အိမ်း ကောင်းသဟ ကောင်းသဟ ကိုရင်တို့ အပြုသဘောဆောင်လါပြီ ဆက်လုပ်... အားပေးတယ်ဟိတ်
April 26, 2011 5:25 AM
မြန်မာမဟုတ်တဲ့ မြန်မာပြည်ကိုချစ်သူ said...
for all မြန်မာ တွေ ။ ကုလားတွေ ဆို ပြီး ခွဲ ခြားပြီးပြောစရာ မလိုပါဘူးကွာ ။ အားလုံးလုတွေပဲ။ မင်းတို့ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေး ရအောင်လုပ်ခဲ့ တဲ့ လူတွေ ထဲမှာ ကုလားတွေလဲပါတာပဲ မင်းတို့ က အရမ်းလူပါးဝလွန်းတယ် ကြည့် စရာ ရှိ အေးအေးကြည့်ပေါ့ ။ လုပ်တဲ့ လူ က လုပ်တယ်။ကြည့် တဲ့လူကကြည့်တယ်။ ဗမာမို့လို့ ကုလားမို့လို့ မလိုပါဘူးကွာ အားလုံးဟာ ညီအစ်ကိုတွေပါ။။
ပို့စ်တင်ချိန်- 11:02 AM 11 comments:
888.com | Winpalace casino | Hit Counter | spielbank | Casinoeuropa
မဖြစ်မနေ ရှင်းလင်း သုတ်သင်ရမည့် ချက်ကြီး အရှုပ်တော...
ဦးညာဏသာရ(ခ)ဒေါက်တာချက်ကြီး၏ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားခဲ...
ဦးဇင်းညာဏသာရခေါ် ဒေါက်တာချက်ကြီးသို့ အထူးလျှောက်ထာ...
ချက်ကြီးဆိုတာ ဘုနုးကြီးတစ်ပါးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်...
ဒေါက်တာချက်ကြီးဘလော့ကို ရေးသားနေသူ ဦးညာဏသာရ အကြော...